တရုတ်နိုင်ငံက အာရပ်နိုင်ငံများနှင့်အတူ အရည်အသွေးမြင့် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ရှီကျင့်ဖိန်ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက အာရပ်နိုင်ငံများနှင့်အတူ အရည်အသွေးမြင့် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ရှီကျင့်ဖိန်ပြောကြား
ပေကျင်း ၊ ဩဂုတ် ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာရပ်နိုင်ငံများနှင့်အတူ အရည်အသွေးမြင့် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အတူတကွမြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှဟွေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၌ ယနေ့ ဩဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ပဥ္စမအကြိမ် တရုတ် – အာရပ်နိုင်ငံများ ကုန်စည်ပြပွဲသို့ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ရှီက တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာရပ်နိုင်ငံများ၏ ပြည်သူများအကြား အစဉ်အလာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကို သတိပြုမိကြောင်း ၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာရပ်နိုင်ငံများသည် မဟာဗျူဟာမြောက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်အားကောင်းလာကြောင်း နှင့် ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမ အတူတကွတည်ဆောက်မှုသည် အကျိုးများသော ရလဒ်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း သဝဏ်လွှာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အာရပ်နိုင်ငံများ၏ အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက် ဖြစ်သည်။ COVID-19 ရောဂါကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာရပ်နိုင်ငံများသည် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၊ အခက်အခဲများကို အတူတကွကျော်လွှားပြီး အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ကူညီမှု၏ သာဓကတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာရပ်နိုင်ငံများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကြိုးပမ်းရန် ၊ ငြိမ်းချမ်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူး နှင့် win-win ရလဒ်များ ရရှိရန် ၊ အရည်အသွေးမြင့် ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမအား အတူတကွ တည်ဆောက်ရန် ၊ တရုတ်-အာရပ် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုမြင့်မားသော အဆင့်သို့ မြှင့်တင်ရန် နှင့် ခေတ်သစ်အတွက် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းနှင့်အတူ တရုတ်-အာရပ် အသိုင်းအဝိုင်းအား အတူတကွ တည်ဆောက်ရေးအတွက် အသင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ် – အာရပ်နိုင်ငံများ ကုန်စည်ပြပွဲအား နင်းရှဒေသ၏ မြို့တော် ရင်ချွန်းမြို့၌ ဩဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Aug. 19 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping sentacongratulatory letter to the fifth China-Arab States Expo that opened Thursday in northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, saying China is willing to jointly promote high-quality Belt and Road cooperation with Arab states.
Photo – Workers make preparations for the fifth China-Arab States Expo, in Yinchuan, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, Aug. 14, 2021. (Xinhua/Wang Peng)